Haddii Dhexe Earth: Shadow of Mordor, Titanfall ama aayahooda waa video ciyaar jecel yahay ama waxa aad jeceshahay in ka badan nostalgic ciyaarta style ciyaaro sida Mario kart 8 ama NBA 2K15, waxaa jira fursad aad rabto in aad qortid wax fantastik ah in dhacdaa (ama in aad samayn!) ciyaarta. YouTube waxaa ka buuxa videos of isagana dilay kulamada cusub ama dib u koob cusub oo ku saabsan brand dhufto ee cusub. Sidee bay u sameeyo kuwa laga cabsado videos oo ay qabsadaan dhammaan riwaayadaha weyn oo kale? Simple-marka aad ogaato barnaamijyada si ay u isticmaalaan in ay ka faa'iidaystaan ​​ka mid tahay qalabka software ugu dambeeyey in ay u qoraan kartaa screen ciyaaraha effortlessly sida aad u ciyaaro!
Fraps waa heegan hore waa u fududahay in la isticmaalo, xitaa lagu qoro newbies, oo weli doorashada ugu caansan lagu qoro video gameplay. Marka laga soo tago in ay user interface fudud, waxa ay soo bandhigaan kartaa bartilmaameedyada ciyaarta oo si fudud u sameeyaan hagaajin u framerates iyo xigtaa. Fraps ayaa waxaa si gaara loogu talagalay in ay ka cararaan halka kulan aad u ciyaareyso iyo record ee tayo sare leh, oo waxay qabtaan shaqo aad u weyn ee hawsha in dadaalka badan. Iyadoo qaar ka mid ah dadka isticmaala caban in tirada files Fraps aad u weyn, waxaad isticmaali kartaa arji kala duwan ku cadaadisaa files ee koombiyuutarka iyo in la wadaago.
The software duubo ciyaarta liteCam qabsan kartaa kulan ilaa 60 fps, oo kulan OpenGL iyo DirectX qori in software kale ma sheegi karo. Inkasta oo aad si fudud u doorato ka furayaasha horena si aad u duubo, taas oo ka dhigaysa in ay u fududahay in la isticmaalo, waxaa jira fursad u lahayn in ay qabsadaan weli darbo oo dadka qaar jecel yihiin in ay leeyihiin. Inkasta oo aysan u leedahay arrin goobaha iyo qalabka dheeraadka ah sida ugu badan badan oo kale software duubo ciyaarta video, waxa aanu soo saaro cajalado tayo wanaagsan oo isagana ka badan mahad si ay u isticmaalaan.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Wondershare Waa aalad video software badan loo la dhisay-in taariikhqorihii webcam oo kuu ogolaanaya in aad si fudud u qabsadaan aad webcam. Duubo Audio waxaa sidoo kale fudud, fiican ee ciyaartoyda ciyaarta kuwaas oo doonaya inay soo bandhigto kulan aad jeceshahay la raaca. Waxay bixisaa dhisay-in converters iyo editor video taageeraya diinta iyo sixiddiisa badan oo qaabab kala duwan video toogtay labada aad fiidiyo ama iPhone ama Android. Wondershare Ka duwan yahay qaar ka mid ah dadka kale ee ku saabsan suuqa sida ay u saamaxdo ma aha oo kaliya video qabashada laakiin sidoo kale waxay bixisaa haystaa sacab muggiis oo video tafatirka, doorashooyin video koombiyuutarka, oo la shaqeeya qalabka kala duwan. Barnaamijkan waxa uu processor sare xawaaraha iyo in badan oo goobo kala duwan, iyo interface fudud oo user-friendly, oo ay la socdaan qalab video tafatirka gaar ah si aad duubo xiiso leh oo fudud. Waxaad halkan kala soo bixi kartaa maxkamad lacag la'aan ah 30-maalin ah oo ay u fiiriyaan,
Ma waxaad caadaysatay Diablo 3: Ultimate Xun Edition? Tus aad xirfadaha waalan dunida meesha quduuska ah lagu badbaadinayo iyadoo video diiwaan yaab leh ka ciyaarta. Qalabka ugu fiican u oggolaadaan in aad si fudud u geliyaan gameplay videos aad meel kasta oo aad jeceshahay in aad la wadaagto.
Top 5 xor ah oo fiican ee Screen Rikoodh Software
> Resource > Record > 3 Options Simple u Rikoodh Video Games